ကိတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားကပြ လိုက်တဲ့ ပုရိသတို့အချစ်တော် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး – Shwe Ba
Homepage / Cele News / ကိတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားကပြ လိုက်တဲ့ ပုရိသတို့အချစ်တော် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ကိတ်လွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ဆက်ဆီကျကျနဲ့ အမိုက်စားကပြ လိုက်တဲ့ ပုရိသတို့အချစ်တော် နန်းမွေစံရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
ဒါ က တော့ ရင်ခုန် သံတွေ မြန်ဆန် သွား ရလောက် အောင် အမိုက်စား ပို့စ်တွေ ပေးနေပြီး ဆွဲဆောင်မှု တွေ ရှိလွန်းနေ တဲ့ နန်းမွေစံ ရဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်. .။ သူမ ဟာ ဂျင်းဘောင်းဘီ အကျပ် လေးကို ဝတ်ဆင် ထားတာ ကြောင့် ကျစ်လစ် သွယ်လျ တဲ့ ကိုယ်လုံး အလှတရား တွေက ပိုမို ပေါ်လွင် နေတာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်.. ။ ပရိသတ် တွေ လည်း ကြည့် ရှု ခံစား နိုင်အောင် နန်းမွေစံ ရဲ့ ပုံရိပ် လေး တွေ ကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူ တင်ဆက်ပေး လိုက် ရပါ တယ် နော်…
အချိုး အစား ပြေပြစ် လွန်းပြီး ရင်သပ် ရှုမော ရလောက် အောင် ဆွဲဆောင် နိုင်လွန်းတဲ့ အမိုက်စား ကိုယ်လုံး လေး ကြောင့် ပုရိသ တွေ ရဲ့ တစ်ခဲ နက် ဝန်းရံ အား ပေးခြင်းကို ရရှိ ထားသူကတော့ မော်ဒယ် နန်းမွေစံ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်..။ သူမ ဟာ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် အ ဖြစ် တစ်စိုက် မတ်မတ် ရပ်တည် နေတာပဲ ဖြစ် ပါ တယ်.. ။ ဝါသနာ ပါရာ အနုပညာ အလုပ် တွေကို လုပ်ကိုင်ရင်း နဲ့ သူမရဲ့ ဘဝလေး ကို ပျော်ရွှင် စရာ ဖြတ် သန်းနေ တာပဲ ဖြစ် ပါ တယ် … .
ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှု တွေ များစွာ နဲ့ ရင်ဆိုင်ရ သော် လည်း မမှု ဘဲ ရှေ့ဆက် ရမယ့် အနုပညာ ပန်းတိုင် ကို မရောက် ရောက် အောင် လျှောက် လှမ်း နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမ ရဲ့ ပရိသတ် ကြီး အတွက် လည်း အမိုက်စား ပုံရိပ် လေး တွေကို မကြာ ခဏ တင်ပေး နေတာ လည်း ဖြစ်ပါ တယ်..။ မနေ့ည က လည်း နန်းမွေစံ ရဲ့ Instagram လူမှု ကွန်ယက် မှာ ပုံလေး တစ်ချို့ ကို ဝေမျှထား တာ လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
ဒါ က ေတာ့ ရင္ခုန္ သံေတြ ျမန္ဆန္ သြား ရေလာက္ ေအာင္ အမိုက္စား ပို႔စ္ေတြ ေပးေနၿပီး ဆြဲေဆာင္မႈ ေတြ ရွိလြန္းေန တဲ့ နန္းေမြစံ ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္. .။ သူမ ဟာ ဂ်င္းေဘာင္းဘီ အက်ပ္ ေလးကို ဝတ္ဆင္ ထားတာ ေၾကာင့္ က်စ္လစ္ သြယ္လ် တဲ့ ကိုယ္လုံး အလွတရား ေတြက ပိုမို ေပၚလြင္ ေနတာ ပဲ ျဖစ္ပါ တယ္.. ။ ပရိသတ္ ေတြ လည္း ၾကည့္ ရႈ ခံစား နိုင္ေအာင္ နန္းေမြစံ ရဲ့ ပုံရိပ္ ေလး ေတြ ကို တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူ တင္ဆက္ေပး လိုက္ ရပါ တယ္ ေနာ္…
အခ်ိဳး အစား ေျပျပစ္ လြန္းၿပီး ရင္သပ္ ရႈေမာ ရေလာက္ ေအာင္ ဆြဲေဆာင္ နိုင္လြန္းတဲ့ အမိုက္စား ကိုယ္လုံး ေလး ေၾကာင့္ ပုရိသ ေတြ ရဲ့ တစ္ခဲ နက္ ဝန္းရံ အား ေပးျခင္းကို ရရွိ ထားသူကေတာ့ ေမာ္ဒယ္ နန္းေမြစံ ပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္..။ သူမ ဟာ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ တစ္ေယာက္ အ ျဖစ္ တစ္စိုက္ မတ္မတ္ ရပ္တည္ ေနတာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္.. ။ ဝါသနာ ပါရာ အႏုပညာ အလုပ္ ေတြကို လုပ္ကိုင္ရင္း နဲ႔ သူမရဲ့ ဘဝေလး ကို ေပ်ာ္ရႊင္ စရာ ျဖတ္ သန္းေန တာပဲ ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္မႈ ေတြ မ်ားစြာ နဲ႔ ရင္ဆိုင္ရ ေသာ္ လည္း မမႈ ဘဲ ေရွ႕ဆက္ ရမယ့္ အႏုပညာ ပန္းတိုင္ ကို မေရာက္ ေရာက္ ေအာင္ ေလၽွာက္ လွမ္း ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။ သူမ ရဲ့ ပရိသတ္ ႀကီး အတြက္ လည္း အမိုက္စား ပုံရိပ္ ေလး ေတြကို မၾကာ ခဏ တင္ေပး ေနတာ လည္း ျဖစ္ပါ တယ္..။ မေန႔ည က လည္း နန္းေမြစံ ရဲ့ Instagram လူမႈ ကြန္ယက္ မွာ ပုံေလး တစ္ခ်ိဳ႕ ကို ေဝမၽွထား တာ လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
Previous post ပုရိသေတွရဲ့ ရင်ခုန်သံကို မြန်သွားစေမယ့် အိန်ဂျယ်ကိုရဲ့ ဆက်ဆီကျတဲ့ အလန်းစားပုံရိပ်များ
Next post ပရိတ်သတ်တွေ အံ့သြသွားအောင် အလန်းစားပုံစံလေးတွေနဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး အလင်းပြလိုက်တဲ့ ပက်ထရစ်ရှာရဲ့ ပုံရိပ်ဆန်းများ